Fanontaniana matetika momba ny Coronavirus | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYFanontaniana matetika momba ny Coronavirus
11 / 03 / 2020 ANKAPOBENY, TORKIA, VIDEOS
1. Inona ny Coronavirus vaovao (2019-nCoV)?
Ny Coronavirus vaovao (2019-nCoV) dia otrik'aretina voafaritry ny 13 Janoary 2020, taorian'ny fikarohana natao tamina vondrona marary izay nanangana soritr'aretina voalohany teo amin'ny taovam-pisefoana (tazo, kohaka, tsy manam-pofonaina) tao amin'ny Faritany Wuhan tamin'ny faran'ny volana Desambra. Tamin'ny fitrandrahana hazan-dranomasina sy biby fiompy ao amin'ity faritra ity no nahitana ny fipoahana voalohany. Avy eo dia niparitaka tamina olona tsirairay izy io ary niely tany amin'ny tanàna hafa tao amin'ny faritanin'i Hubei, indrindra fa i Wuhan, sy ireo faritany hafa ao amin'ny Repoblika People of China.
2. Ahoana no nampitana ny Coronavirus vaovao (2019-nCoV) vaovao?
Mifindra amin'ny alàlan'ny fanosihosana ireo atody miparitaka any amin'ny tontolo iainana amin'ny fitrandrahana ny marary. Rehefa avy mikasika ny làlan-kaleha misy areti-mifindra amin'ireo singa mandavalan'ny marary, ny otrik'aretina dia azo alaina amin'ny alàlan'ny famindrana ny tanana amin'ny tarehy, maso, orona na vava tsy manasa. Mampidi-doza ny hikasika ny maso, orona na vava amin'ny tanana maloto.
3. Ahoana no fitiliana ny tsimokaretina coronavirus vaovao?
Ny fitsapana molekular ilaina amin'ny fitiliana coronavirus vaovao dia misy eto amin'ny firenentsika. Ny fitiliana diagnostika dia atao ao amin'ny laboratoara momba ny mari-pahaizana momba ny fahasalamana ara-pahasalamana ihany no atao ao amin'ny National Directorology of Health.
4. Misy otrikaretina mahomby amin'ny otrikaretina azo ampiasaina hanakanana na hitsaboana otrikaretina Coronavirus (2019-nCoV) vaovao?
Tsy misy ny fitsaboana mahomby ho an'ity aretina ity. Arakaraka ny toetry ny marary amin'ny ankapobeny, dia ampiharina ny fitsaboana fanohanana ilaina. Ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina amin'ny virus io dia atao fanadihadiana. Na izany aza, tsy misy fanafody mahomby amin'ny virus ankehitriny.
Afaka misoroka na mitsabo ny otrikaretina vaovao coronavirus (5-nCoV) ny antibiotika?
Tsia, tsy misy fiantraikany amin'ny otrikaretina ny antibiotika, dia mahomby amin'ny bakteria ihany. Ny Coronavirus vaovao (2019-nCoV) dia otrikaretina ary noho izany dia tsy tokony hampiasaina hialana na hitondrana ny aretina ny antibiotika.
6. Hafiriana no fe-potoana fananganana fery ny Coronavirus (2019-nCoV) vaovao?
Ny vanim-potoana fanafoanana ny otrikaretina dia eo anelanelan'ny 2 andro sy 14 andro.
7. Inona avy ireo soritr'aretina sy aretina ateraky ny Coronavirus vaovao (2019-nCoV)?
Na dia voalaza aza fa mety misy tranga tsy misy soritr'aretina, tsy fantatra ny isan'izy ireo. Ny soritr'aretina mahazatra indrindra dia ny tazo, kohaka ary fohy ny fofon'aina. Amin'ny tranga mafy, ny pnemonia, ny tsy fahampiana taovam-pisefoana mahery vaika, ny tsy fahombiazan'ny voa ary ny fahafatesana dia mety hivoatra.
8. Iza no hisy fiantraikany amin'ny Coronavirus vaovao (2019-nCoV) bebe kokoa?
Araka ny angona voaray, ireo izay manana fahanterana sy aretina miteraka (toy ny asma, diabeta, aretim-po) dia tandindomin-doza kokoa ny fivoaran'ny virus. Miaraka amin'ny angon-drakitra amin'izao fotoana izao dia fantatra fa mivoatra haingana ny aretina amin'ny 10-15% ny aretina, ary ny fahafatesana eo amin'ny 2% eo ho eo.
9. Moa ve ny aretina Coronavirus (2019-nCoV) vaovao izay miteraka fahafatesana tampoka?
Ny aretina dia mampiseho dingana somary miadana, araka ny angon-drakitra navoakan'ny marary. Mandritra ny andro voalohany dia mitaraina ny fitarainana malefaka (toy ny tazo, ny tenda, ny fahalemena) ary avy eo ireo soritr'aretina toy ny kohaka sy tsy fahampian'ny fofonaina. Matetika mavesatra amin'ny marary ny marary amin'ny ankapobeny rehefa afaka 7 andro. Noho izany, ny horonan-tsary momba ireo marary izay ao amin'ny media sosialy, tampoka tampoka sy latsaka na maty dia tsy taratry ny marina.
10. vaovao aretina Coronavirus tatitra avy any Turkey (2019-NCover) Misy raharaha?
Tsia, tsy mbola hita tany amin'ny firenentsika ny aretina New Coronavirus (2019-nCoV) (hatramin'ny 7 febroary 2020).
11. Firenena iza, ankoatry ny Repoblika People of China (PRC) no atahorana ny aretina?
Ny aretina dia mbola fahita hatrany amin'ny Repoblika People of China. Ny trangan-javatra hita any amin'ny firenena hafa eran'izao tontolo izao dia ireo avy amin'ny PRC mankany amin'ireo firenena ireo. Any amin'ny firenena sasany, vitsy dia vitsy ny olom-pirenena avy amin'ny PRC no tratran'izany teratany izany. Amin'izao fotoana izao, tsy misy firenena hafa ankoatra ny PRC izay miitatra haingana ny raharaha ao an-trano. Ny Birao Mpanolotsaina ara-tsiansa ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana dia tsy mampitandrina afa-tsy amin'ny PRC fa "tsy mandeha raha tsy hoe ilaina". Ny mpandeha dia tokony hanaraka ny fampitandremana ho an'ny manampahefana nasionaly sy iraisam-pirenena.
12. Inona avy ireo hetsika ataon'ny Ministeran'ny fahasalamana amin'ity resaka ity?
Ny fivoarana eto an-tany sy ny fatran'ny iraisam-pirenena momba ny aretina dia arahi-maso akaiky ny Minisiteranay. Ny New Coronavirus (2019-nCoV) Siansa momba ny siansa dia noforonina. Ny fivoriana fanombanana ny risika sy ny siansa dia notanterahina ho an'ny aretina Coronavirus (2019-nCoV) vaovao. ny lafiny roa amin'ny olana (Torkia Sisintany sy Coastal Tale Jeneraly ny Fahasalamana,-bahoaka hopitaly, ny Jeneraly Tale hamehana Medical Services Tale Jeneraly for Ivelany Fifandraisana Tale jeneraly, araka ny mpandray anjara) amin'ny alalan'ny anisan'izany ny fisehoan-javatra tsy nanaraka sy ny fivoriana raha tsy mbola hatao tsy tapaka.
Ny ekipa miasa miorina amin'ny fototry ny 7/24 dia napetraka tao amin'ny Ivontoerana Fandidiana ny Fahasalamam-bahoaka ho an'ny daholobe ao anatin'ny Tale jeneralin'ny General Health. Eto an-tanindrazantsika, ilaina ny mitandrina tsara araky ny tolo-kevitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Teo amin'ny toerana fidirana ny firenentsika toy ny seranam-piaramanidina sy ny fidirana amoron-dranomasina dia noraisina ny fepetra ho fampahafantarana ireo mpandeha marary izay mety avy amin'ny faritra mampidi-doza sy ny hetsika tokony hatao raha sendra ny ahiahy ny aretina. Ny sidina mivantana niaraka tamin'ny PRC dia nijanona hatramin'ny 1 martsa. Ny fampiharana fanaraha-maso fakantsary hafanana, izay nampiharina voalohany ho an'ny mpandeha avy amin'ny PRC, dia nitarina mba hampiditra ny firenena hafa hatramin'ny 05 Febroary 2020.
Misy torolàlana momba ny fizotry ny aretina, ny fomba ampiharina amin'ny tranga mety, efa voaomana ny fisorohana sy ny fepetra fanaraha-maso. Ny algorithm fitantanana ny raharaha voafaritra dia noforonina ary voafaritry ny andraikitra sy andraikitra ny antoko mifandray. Io torolàlana io dia misy ny zavatra tokony hataon'ny olona izay handeha na avy any amin'ny firenena manana raharaha. Ity torolàlana sy fampisehoana momba ny torolàlana ity, ny valin'ny fanontaniana napetraka matetika, ny afisy sy ny bokikely dia hita ao amin'ny tranokala ofisialy ny Tale jeneralin'ny General Health. Ankoatr'izay, ireo santionany amin'ny taovam-pisefoana dia alaina amin'ny olona manaraka ny famaritana ireo tranga mety aterina ary mitoka-monina any amin'ny toe-pahasalamana momba ny fahasalamana mandra-pahafahana ny valin'ny santionany.
13. Misy fepetra ilaina ve ny fandanjalanjana ny fakantsary hafanana?
Ireo fakan-tsary hafahafa dia ampiasaina hamantarana ny olona manana tazo sy hanao fanadihadiana fanampiny raha mitondra aretina amin'ny fisarahana azy amin'ny olona hafa. Mazava ho azy, tsy azo atao ny mamantatra ny marary tsy misy tazo na ireo izay mbola eo amin'ny sehatra incubation ary mbola tsy voan'ny aretina. Saingy, satria tsy mbola misy fomba haingana sy mahomby hafa azo ampiasaina hametrahana scanner, ny firenena rehetra dia mampiasa fakantsary mafana. Ho fanampin'ireo fakan-tsary hafanana, ny mpandeha avy amin'ny faritra mampidi-doza dia ampandrenesina amin'ny fiteny samihafa ao amin'ny fiaramanidina, ary ny bokin'ny fampahalalana amin'ny fiteny vahiny dia zaraina amin'ny toerana pasipaoro.
14. Misy vaksiny Coronavirus (2019-nCoV) vaovao ve?
Tsia, mbola tsy misy vaksiny novolavolaina .. Voalaza fa ny vaksiny iray azonay am-pilaminana amin'ny olombelona na eo aza ny fivoaran'ny teknolojia dia azo vokarina amin'ny taona voalohany.
15. Inona avy ireo soso-kevitra amin'ny tsy hisian'ilay aretina?
Ny fotokevitra fototra narosony hampihenana ny loza mitatra amin'ny fifindran'ny aretin'ny taovam-pisefoana dia mihatra amin'ny New Coronavirus (2019-nCoV). Ireo no:
- Ny fanadiovana tanana dia tokony hodinihina. Tokony hosasana amin'ny savony sy ny rano mandritra ny 20 segondra farafahakeliny ny tanana, ary tokony hampiasaina amin'ny tsy fisian'ny savony sy rano ny antiseptika tanana. Tsy ilaina ny mampiasa savony amin'ny antiseptika na antibacterial, ampy ny savony mahazatra.
- Ny vava, orona ary maso tsy tokony hikasika raha tsy manasa tànana.
- Ny olona marary dia tokony hisoroka ny fifandraisana (raha azo atao, farafahakeliny 1 m miala).
- Tokony hosasana matetika ny tànana, indrindra aorian'ny fifandraisana mivantana amin'ny marary sy ny tontolo iainany.
- Androany, tsy ilain'ny olona salama mampiasa saron-tava ato amin'ny firenentsika. Ilay olona voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana dia tokony mandrakotra ny orony sy ny vavany amin'ny taratasy vita amin'ny ratra mandritra ny mangotraka na mifoka, raha tsy misy ravin-taratasy, ampiasao ny elatra ao anatiny, raha azo atao, tsy miditra amin'ny toerana be olona, ​​raha ilaina, manampina ny vava sy orona, mampiasa masika fitsaboana raha azo atao. dia soso-kevitra.
16. Inona no tokony hataon'ny olona mivezivezy any amin'ny firenena manana faharetana feno marary, toy ny Repoblika People of China, mba hisorohana ilay aretina?
- Tokony hodiovina matetika ny tanana, indrindra rehefa avy mifandray mivantana amin'ny marary sy ny tontolo iainany.
- Raha azo atao dia tsy tokony hitsidika izany eny amin'ny tobim-pahasalamana noho ny fisian'ny marary, ary ny fifandraisana amin'ny marary hafa dia tokony ho kely kokoa amin'ny tranga izay ilàna azy hiakatra any amin'ny sampana fitsaboana.
- Rehefa mikohaka na mihetsiketsika dia tokony ho rakotra ravin-taratasy azo itokisana ny orona sy ny vava, amin'ny tranga tsy misy ravin-taratasy, dia tokony hampiasaina ny anatiny ao anatiny, raha azo atao dia tsy tokony hiditra any amin'ny toerana be olona izy, raha ilaina ny hidirany, tokony hidiana ny vava sy ny orona, ary tokony hatao takelaka fitsaboana.
- Ny fihinana biby masiaka na biby madinidinika dia tokony hialana. Sakafo nahandro tsara dia tokony ho tiana.
- Ireo faritra tsy dia misy atahorana ho an'ny otrikaretina amin'ny ankapobeny, toy ny toeram-piompiana toeram-piompiana, tsenan'omby ary faritra izay tokony hovonoina biby
- Raha misy soritr'aretina amin'ny taovam-pisefoana ao anatin'ny 14 andro aorian'ny fitsangatsanganana, ny saron-tava dia tokony hitafy eo amin'ny sampana ara-pahasalamana akaiky indrindra, ary tokony hampahafantarina ny dokotera ny tantaran'ny fitsangatsanganana.
17. Inona no tokony hataon'ny olona any an-tany hafa mba hisorohana ilay aretina?
- Rehefa mikohaka na mihetsiketsika dia tokony hosokosina taratasy tsy azo ampiasaina ny orona sy ny vava, amin'ny tranga tsy misy ravin-taratasy, dia tokony hampiasaina ny anatiny ao anatiny, raha azo atao dia tsy tokony hiditra any amin'ny olona sy toerana izany.
- Ny saka-mofomamy dia tokony ho tiana noho ny sakafo manta.
18. Mety misy ve ny fandefasana coronavirus amin'ny fonosana na vokatra avy amin'ny Repoblika People of China?
Amin'ny ankapobeny, ireo otrik'aretina ireo dia afaka mijanona ho fotoana fohy mandritra ny fotoana fohy, noho izany dia tsy misy andrim-pandrindrana amin'ny fonosana na entana.
19. Misy risika ny aretina coronavirus vaovao ve eto amintsika?
Mbola tsy misy tranga lava eto amin'ny firenentsika. Sahala amin'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao, dia mety hiseho ny tranga mitranga eto amin'ny firenentsika: Tsy misy famerana ny olana ara-pahasalamana momba izany olana izany.
20. Misy fetra fitsangatsanganana any Sina ve?
Ny sidina mivantana rehetra avy any Chine dia nijanona tamin'ny 5 Febroary 2020 ka hatramin'ny 2020 martsa. Ny Birao Mpanolotsaina ara-tsiansa ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana dia tsy mampitandrina afa-tsy amin'ny PRC fa "tsy mandeha raha tsy hoe ilaina". Ny mpandeha dia tokony hanaraka ny fampitandremana ho an'ny manampahefana nasionaly sy iraisam-pirenena.
21. Ahoana no tokony hanadiovana ny fiara mandeha?
Tsiahivina fa milamina tsara ireo fiara ireo ary ny fanadiovana ankapobeny no atao amin'ny rano sy ny mpanadio. Torohevitra ny hanadio ny fiara aorian'ny fampiasana tsirairay, raha azo atao.
22. Inona no fepetra tokony horesahina mandritra ny dia miaraka amin'ny fiara fitetezam-paritany?
Tokony ho azo antoka io fa ny fiara mandeha matetika amin'ny rivotra madio mandritra ny fampiasana. Ao amin'ny fanamafisana ny fiara dia tokony alefa noho ny hafanana sy ny hatsiaka rivotra amin'ny rivotra alaina ivelany. Ny fiovan'ny rivotra amin'ny fiara tsy tokony ampiasaina.
23. Hotely, hostel, sns. Ny vahiny tonga manangona. Mety misy aretina manjo ny mpiasa notendrena ve rehefa tonga any amin'ny toeram-ponenany?
Ny vahiny, izay mitondra ny fananany manokana, toy ny valizy, dia tsy antenaina ho voan'ny areti-mifindra (mety hiteraka areti-mifindra) na dia tsy afaka mivelona mandritra ny fotoana maharitra aza ilay virus. Na izany aza, amin'ny ankapobeny, aorian'ny fanao toy izany, tokony hosasana avy hatrany ny tanana na diovina amin'ny tanana misy antiseptika tànana mifototra amin'ny alikaola.
Ankoatr'izay, raha misy vahiny tonga avy any amin'ny faritra izay mararin'ny aretina, raha misy tazo, mihintsana, mikohaka eo amin'ireo vahiny, tsara kokoa ny manao saron-tava fitsaboana ho an'ity olona ity sy ny mpamily mitafy saron-tava fitsaboana ho fiarovana ny tenany. Tokony ho azo antoka fa voantso ny 112 ary omena ny fampahalalana na fampahafantarana mialoha ny andrim-panjakana momba ny fahasalamana.
24. Inona ny fepetra horaisina ao amin'ny hotely?
Ny fanadiovana fenitra amin'ny rano sy ny mpanadio dia ampy amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ny fiheverana manokana dia tokony hojerena amin'ny tany izay matetika mifandray amin'ny tànana, ny tànan'ny tànana, ny bateria, ny haingon-trano, ny fidiovana ary ny fanadiovana ny rano. Tsy misy porofo siantifika fa ny fampiasana ny vokatra maromaro izay ambara fa mahomby indrindra amin'ity virus ity dia manome fiarovana fanampiny.
Tokony handinika tsara ny fanadiovana tanana. Tokony hosasana amin'ny savony sy ny rano mandritra ny 20 segondra farafahakeliny ny tanana, ary tokony hampiasaina amin'ny tsy fisian'ny savony sy rano ny antiseptika tanana. Tsy ilaina ny mampiasa savony amin'ny antiseptika na antibacterial, ampy ny savony mahazatra.
Ilay olona voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana dia tokony mandrakotra ny orony sy ny vavany amin'ny taratasy vita amin'ny tavy mandritra ny mangotraka na mifoka, raha tsy misy ravin-taratasy, ampiasao ny elatra ao anatiny, raha azo atao, tsy miditra amin'ny toerana be olona, ​​raha ilaina, manampina ny vava sy orona, mampiasa masika fitsaboana raha azo atao. dia soso-kevitra.
Koa satria tsy afa-miaina mandritra ny fotoana ela ny tsimokaretina, dia tsy misy fandotoana andrasana amin'ny olona mitondra ny valizy ho an'ny marary. Azo atao ny mametraka antiseptika tanana amin'ny alikaola any amin'ny toerana azo idirana.
25. Inona avy ny fepetra tokony horaisin'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina?
Ny fepetra ankapobeny dia tokony hatao mba hisorohana ny aretina.
Koa satria tsy afa-miaina mandritra ny fotoana maharitra ny tsimokaretina, dia tsy misy fandefasana entana amin'ny olona mitondra ny valizy an'ny marary. Mety tsara ny hametraka antiseptika ny tanana alikaola amin'ny toerana azo idirana.
26. Inona avy ireo karazana fepetra tokony hitandrina ireo mpiasa miasa any amin'ny trano fisakafoanana sy ny fivarotana izay avy amin'ny mpizahatany?
Ny fepetra fiarovana amin'ny otrikaretina amin'ny ankapobeny dia tokony horaisina.
Ny fanadiovana mahazatra amin'ny rano sy ny mpanadio dia ampy ho an'ny fanadiovana ny tany. Ny fijerena manokana dia tokony homena manokana amin'ny fanadiovana ny fikosohana ny varavarana, faucre, handrava, trano fidiovana ary ny tatatra amin'ny tanany. Tsy misy porofo ara-tsiansa fa ny fampiasana ny vokatra marobe izay ambara fa mahomby indrindra amin'ity virus ity dia manome fiarovana fanampiny.
Mety tsara ny mametraka antiseptika tanana amin'ny alikaola amin'ny toerana azo idirana.
27. Inona avy ireo fepetra fisorohana amin'ny aretina?
Mandritra ny fiterahana na ny fihodinan'ny ati-doha, dia aroso ny manarona ny orona sy ny vava amin'ny taratasy mivalona azo ampiasaina, raha tsy misy ny fangatahana, ampiasao ny zorony ao anatiny, raha azo atao raha tsy miditra amin'ny toerana be olona.
28. Alefako any an-tsekoly ny zanako, mety misy otrikaretina ve ny Coronavirus (2019-nCoV) vaovao?
Ny otrikaretina coronavirus vaovao (2019-nCoV) izay nanomboka tany Chine dia tsy mbola hita tany amin'ny firenentsika mandraka androany ary noraisina ny fepetra ilaina hisorohana ny fidirana amin'ny aretina eto amintsika. Mety hihaona amin'ny otrikaretina miteraka flu, sy hatsiaka ary hatsiaka any an-tsekoly ny zanakao, saingy tsy antenaina hiatrika izany satria tsy mivezivezy ny Coronavirus (2019-nCoV) vaovao. Amin'izany toe-javatra izany, ny fampahalalana ilaina dia nomen'ny Ministeran'ny fahasalamana.
29. Ahoana no tokony hanadiovana ny sekoly?
Ny fanadiovana fenitra amin'ny rano sy ny mpanadio dia ampy ho an'ny fanadiovana sekoly. Ny fijerena manokana dia tokony homena manokana amin'ny fanadiovana ny fikosohana ny varavarana, faucre, handrava, trano fidiovana ary ny tatatra amin'ny tanany. Tsy misy porofo siantifika fa ny fampiasana ny vokatra maromaro izay ambara fa mahomby indrindra amin'ity virus ity dia manome fiarovana fanampiny.
30. Rehefa miverina amin'ny fiatoana ny semester miverina amin'ny oniversite aho, mijanona ao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra, afaka mahazo otrikaretina vaovao Coronary (2019-nCoV) ve aho?
Ny otrikaretina coronavirus vaovao (2019-nCoV) izay nanomboka tany Chine dia tsy mbola hita tany amin'ny firenentsika mandraka androany ary noraisina ny fepetra ilaina hisorohana ny fidirana amin'ny aretina eto amintsika.
Ny gripa dia mety hihaona amin'ireo viriosy miteraka hatsiaka sy hatsiaka, saingy tsy antenaina ny hihaonana satria tsy ao anaty mivezivezy intsony ny Coronavirus (2019-nCoV) vaovao. Amin'izany toe-javatra izany, ny fampahalalana ilaina momba an'io aretina io dia nomen'ny Fikambanan'ny fampianarana ambony, ny Institution de crédit dormeurs ary ireo mpianatra mitovy amin'ny dormitory.
31. Mahavita sy mamindra ny New Coronavirus (2019-nCoV) ve ny biby an-trano?
Ny biby fiompy, toy ny saka / alika an-trano dia tsy ampoizina ho tratry ny New Coronavirus (2019-nCoV). Na izany aza, aorian'ny fifandraisana amin'ny biby dia tokony hosasana amin'ny savony sy rano foana ny tanana. Noho izany, ny fiarovana dia homena amin'ny otrikaretina hafa azo afindra amin'ny biby.
32. Afaka manakana ny otrikaretina New Coronavirus (2019-nCoV) ve ny fandroahana ny oronao amin'ny ranonao?
No. Ny fanasana ny orona tsy tapaka amin'ny brine dia tsy misy fiarovana amin'ny otrikaretina New Coronary (2019-nCoV).
Afaka misoroka ny areti-mifindra coronavirus (33-nCoV) vaovao ny vinaingitra?
No. Ny fampiasana vinaingitra dia tsy misy mahasakana ny fihanaky ny New Coronavirus (2019-nCoV).
FANONTANIANA FAMETRAKY NY OLONA NY ATAO TSIANJERY
Fanontaniana sy valiny matetika momba ny seranam-piaramanidin'i Istanbul
Fanehoan-kevitr'i Uysal momba ny fanapahan-kevitry UKOME momba UBER
Fanontaniana inona avy no tao amin'ny rakitra izay nandeha nankany amin'ny Ministera Yıldırım noho ny fiaran-dalamby haingam-pandeha?
Famaritana ny tetezan'i Rahmanlar avy amin'ny DSI
Btk sy Logistics Center momba ny solombavambahoaka voafidy
Ny orinasa roa samihafa dia miasa eo amin'ny planeta lamasinina
Fampahalalana ny fanitsiana ny lahateny nataon'ny lehiben'ny fikarakarana Burulaş Fidansoy
Zavatra Links amin'ny dalamby System any Torkia
Fanazavana tena manan-danja momba ny minibuses avy amin'ny filoha Kadir Topbaş
Navoakan'ny ben'ny tanàna Kocaoğlu fanontaniana momba ny fitaterana an'i Ege TV
Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy-Ny fangatahana Metro an'i Eagle momba ny vidiny ...
Torkia nanomana ny Lalàna momba ny fanalalahana ny Railway Transport ...
Ahoana no hiarovana amin'ny Coronavirus?
Fampiharana momba ny làlan-kaleha noho ny fandalinana an'i Darıca Gebze